Depo akapfura 101: Zvese zvaunoda kuti uzive nezveDepo-Provera - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Info Info, Nhau Nharaunda, Wellness Dhinda Kambani, Hutano Dzidzo Nhau Checkout Dzidzo Yehutano Nharaunda, Kambani Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Nhau Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Iyo Checkout Zvipfuwo Info Info, Hutano Dzidzo
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Iyo Depo yakapfura 101: Zvese zvaunoda kuti uzive
Iyo Depo yakapfura 101: Zvese zvaunoda kuti uzive
Kune nzira dzakasiyana siyana dzekudzora vakadzi. Asi haisi sarudzo dzese dzakaenzana. Kana iwe wakacheneswa nemupi wako wezvehutano kuti ushandise hutachiona hwekuzvarwa uye iwe ungade kudzivirira kunetseka kwekurangarira kutora mapiritsi ezuva nezuva kana kutamba nechimedu chehomoni, ungangoda kufunga nezve kuberekwa kwepfuti- Depot Tarisa .
Chii chinonzi Depo shot?
Iyo inozivikanwa zvakare seDepo kupfura, kuberekwa kudzora kupfura, kana DMPA, Depo-Provera inzira inoshamisa inoshanda, yakachengeteka, uye inodzoserwa yekudzivirira kubereka iyo yakatanga kuwanikwa muna 1992. CDC kudzidza kwakaratidza kuti vangangoita 25% yevakadzi vakashandisa kudzivirira kubata pamuviri mukati megore ra2011 kusvika 2015 vakamboedza kupfurwa, zvichiita kuti ive sarudzo yakajairika panguva iyoyo kupfuura iyo IUD kana hormone chigamba .
Kunyangwe isiri yakareba-kuita seiyo kudyara kana IUD, iyo yekudzivirira kuberekwa kupfura inogara kwenguva yakareba kupfuura piritsi kana chigamba nekuti wega muyero wepfuti unoshanda kwemwedzi ingangoita mitatu.
Depo shot rinoshanda sei?
Depo-Provera (chii chinonzi Depo-Provera?) Inzira inobaiwa jekiseni yekudzivirira kuberekwa iyo inoshandisa 150 mg yehomoni medroxyprogesterone acetate (progestin) kumisa ovulation uye kuomesa mukaka wako wechibereko. Inowanzojowa ruoko rwako rwekumusoro kana garo nemupi wako wekuchengetwa kwehutano pahofisi yake vhiki dzese gumi nembiri kusvika kumatatu. Depo-Provera ndeye IM (jekiseni repamoyo), izvo zvinoreva kuti inojowa mumhasuru. Inowanikwa mune zvese zita-zita uye generic fomu.
mangani mazano aunogona kutora muzuva rimwe chete
(Depo-Provera inowanikwawo padosi repasi pasi pezita Depo-SubQ Tarisa 104 , asi hapana generic inowanikwa mune iyo dosi.) Iyi vhezheni jekiseni rinotsvedza, zvinoreva kuti jekiseni riri pasi peganda chete.
Iyo Depo pfuti inotanga kushanda nekukasira pasina chikonzero chekuchengetedza kuberekwa kwekuzvibata kana iwe ukachiwana mukati memazuva manomwe ezuva rekutanga rekuenda kwako kumwedzi . Kana iwe ukawana jekiseni rako rekubata pamuviri kunze kwenguva ino, uchafanira kurega, kana kushandisa nzira yekuchengetedza (semakondomu) kwevhiki mushure mekutanga kupfura kwako.
chii chinonzi vistaril 25 mg yakashandiswa
Iyo yekudzivirira kubereka kupfura ndeye 99% inoshanda mukudzivirira nhumbu kana ichiitiswa zvakakwana panguva, inova kumwe pakati pemasvondo gumi nemaviri kusvika gumi nematatu. Kana iwe usingakwanise kuzviita kuhofisi yemubatsiri wako wezvehutano panguva iyoyo kana ukakanganwa kuita musangano wekutevera, kushanda kweDepo-Provera kupfura kunodonhera ku94%, uye ungatofanira kutora bvunzo yepamuviri pamberi dosi rako rinotevera.
Pane here chero Depo akapfura mhedzisiro?
Yakawanda mhedzisiro mhedzisiro inosangana neDepo-Provera inoenda mushure memwedzi miviri kana mitatu yekutanga kupfura, asi heano mashoma ekuchengeta mundangariro:
Kubuda ropa zvisina kujairika
Kupomba kana unyoro panzvimbo yejekiseni
Yakadzikira bonde drive
Kuneta, kushaya simba, kana kuneta
Nguva dzisina kumwedzi dzekuenda kumwedzi, kusanganisira kusatomboita nguva zvachose
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiita ropa remukadzi, zvakanyanya migraine neaura, iyo yeergic reaction, uye / kana zvakanyanya kushushikana, bata wako wezvehutano mupi wezano rekurapa nekukurumidza
Depo-Provera inogona kuwedzera njodzi yako yeimwe gomarara uye ectopic nhumbu, uye haifanire kushandiswa nechero munhu ane kana ane gomarara repazamu.
Ndezvipi zvakanaka zveDepo shot?
Kuvanzika:Ndiwe chete iwe nemubatsiri wako wezvehutano unofanirwa kuziva kuti uri pakubata nhumbu.
Nyore: Izvo hazvidi muyero wezuva nezuva. Iko hakuna zvakare kukosha kwekushandisa kondomu yekudzivirira kubata pamuviri - asi makondomu anofanira achiri kushandiswa kudzivirira kutapuriranwa pabonde.
Zviratidzo zvenguva: Kuberekwa kwepfuti kunogona kuderedza kuenda kwako kumwedzi kana kunyange kuimisa zvachose, uye inogona kubatsira nekupwanya uye kurwadziwa.
Hutano mabhenefiti: Inogona kuderera endometriosis uye uterine fibroids , pamwe nenjodzi yekenza yemendometri.
Unogona kuwedzera mikana yako yekutora pfuti yako panguva kana ukashandisa karenda kana app zviyeuchidzo, kana hofisi yemubatsiri wako wehutano ichipa ruremekedzo kana maemail kana yakwana nguva yekugadzwa kwako kunotevera, kana kana ukaronga yako inotevera kupfura panguva iyoyo yekugadzwa kwako ikozvino. Rangarira, iyo pfuti inoshanda zvakanyanya kana iwe uri panguva yejekiseni rako.
Ndezvipi zvakashata zveDepo shot?
Izvi ndizvo zvinonetsa zvakanyanya kuyera kana uchifunga nezveDepo-Provera, sekureva kwe US Chikafu neDrug Administration (FDA) .
Kubereka: Zvinogona kutora kusvika kumwedzi yakati wandei kuti kuenda kumwedzi kwako kudzokere pane yakajairwa nguva, uye zvinogona kunonotsa kugona kwako kubata pamuviri kusvika pamwedzi gumi nemasere mushure mekupedzisira kupfura. (Iyo yepakati nguva ndeyemwedzi gumi asi inogona kutangira pamwedzi mina kusvika 31.)
Zvirwere zvepabonde. Iyo yekuzvarwa yekudzivirira haina kudzivirira kubva kuSTDs, saka makondomu uye dzimwe nzira dzekudzivirira dzichiri kudikanwa kune bonde rakachengeteka.
Kurasikirwa kwehuwandu hwepfupa: Iwe nemubatsiri wako wehutano munokurukura nezvengozi yenyu ye osteoporosis zvisati zvaitika. US Food and Drug Administration yakurudzira kuti Depo-Provera isashandiswe kwenguva inopfuura makore maviri nekuti vamwe varwere vanoona kurasikirwa kwefupa remaminera, izvo zvingave zvakakosha. Iyo FDA label inotaura kuti kurasikirwa kwepfupa kwakakura nekureba kwenguva yekushandisa uye inogona kunge isingadzoreke zvachose. Varwere vanokurudzirwa kutora vitamini D uye calcium kudzivirira kurasikirwa kwefupa. Kumbira mupiki wako wezvehutano kuti ndeipi dosi yaunofanira kutora.
Kuronga: Kana zvichinetsa kusvika kuhofisi yemupi wezvehutano kana iwe uchikwanisa kukanganwa nguva dzakatarwa, ungangoda kusarudza nzira yekudzivirira kuberekwa yaunogona kuzvitora, semapiritsi ekudzivirira kubereka kana zvigamba zvehomoni, kana nzira dzakareba-refu kufanana neIUD.
Iyo Depo kupfura inodhura zvakadii?
Kana iwe uchibhadhara zvachose muhomwe, iyo generic (medroxyprogesterone acetate) inokumhanyisa madhora zana nemakumi mana, asi vazhinji veinishuwarenzi uye Medicare inovhara kanenge chikamu chemutengo, kana zvisiri zvese zvacho. Zvichienderana nekhemisi, iyo yekunze-kwehomwe mutengo weiyo isiri-generic (zita-zita) Depo-Provera inogona kukumhanyisa uchitenderedza madhora mazana maviri nemazana mashanu.
Kune nzira dzakawanda dzekudzikisa mutengo wako wezvinodhaka kana uchiziva nekuenzanisa mitengo, kutaura nachiremba wako, kana kushandisa a Depo-Provera coupon kubva kuSingleCare . Tsamba dzako dzinogona kunge dzakachipa pasina inishuwarenzi. Heano mutungamiriri pamusoro pekuwana yakaderera-mutengo kana kunyange yemahara yekuzvarwa, kana kana pasina inishuwarenzi
vangani vanhu vape mune isu
Tora kadhi reSpecialCare rekutora kadhi
Maitiro ekurapa arthritis muimbwa
Maitiro ekuchengeta vana vako vane hutano gore rese
yakawanda sei ibuprofen yandinogona kutora zvakachengeteka
kubata pamuviri kunobatsira acne kana kuita kuti zviwedzere
chii chekushandisa svoto panguva yekuzvitakura
imarii yekurapwa ivf
iboka ripi rine zviitiko zvakanyanya kwazvo zvekusagadzikana kwekudya?
zvinorevei creatinine mukuyedza ropa